Affinity waxay barnaamijyadeeda naqshadeynta ka dhigeysaa bilaash 90 maalmood | Abuurista khadka tooska ah
Affinity waa shirkad aan marar badan ka hadalnay sababtoo ah tayada sare ee ay u keento barnaamijyadeeda naqshadeynta. Sidii sanadkii hore oo faafitaan buuxa ahdib ugu noqo waxay bixiyaan tijaabooyin 90-maalmood ah oo barnaamijyada ah sida Sawir, Naqshadeeye, iyo Madbacad.
Saddex codsi oo gaar ah oo ah beddellada ugu wanaagsan ee barnaamijyada Adobe sida Photoshop, Illustrator iyo InDesign. Waxaan ka wada hadalnay wanaagga iyo Faa'iidooyinka daabacaadaha Affinity ama sida Photo waa codsi aad u wanaagsan oo lagu dayanayo waayo-aragnimada Photoshop iyadoo hal lacag la bixinayo
Isku xirnaashaha ayaa daqiiqad qaadatay si ay uqorto daqiiqado nool Iyo sidii sanadkii hore bartamaha masiibada, waxay dhigeen tijaabooyin 90 maalmood oo bilaash ah dhammaan barnaamijyadooda. Waxay ku andacoodaan, sidaan ugu sii wadno isla kuwaa, waxay dib kuugu soo celiyeen 90-ka maalmood si aad ugu tijaabiso codsiyadooda gabi ahaanba.
Y. in tijaabadu ay tahay labada nooc ee Mac iyo Windows. Xitaa haddii aad isku dayday barnaamijyadooda sanadkii hore imtixaanadaas 90 maalmood, waxaad dib u isticmaali kartaa isla koontada si aad u isticmaasho 90 maalmood markale.
Xaqiiqdii, haddii aad horeyba u rabtay inaad ku sameyso mid ka mid ah barnaamijyada, Waxay ku leeyihiin iyaga oo la siinayo qiimo dhimis 50% ah. Naqshadeeyaha Affinity, baddalkaaga Sawirka, waxaa laga heli karaa 50% 27,99 euro; Sawirka Affinity, ikhtiyaarkaaga ku yaal Adobe Photoshop, waxaad ku heli kartaa 27,99 euro markii ay badanaa tahay 54,99; iyo Publisher, isla dalab isku qiimo ah si loogu raaxeysto beddelka InDesign ee Adobe weyn.
Waa inaan ku xasuusinaa inaad tahay codsiyada sidoo kale waxaa laga heli karaa iPad-ka, markaa ha moogaanin jaaniska aad kuheli karto barnaamij nashqadeyn culus sida seddexda aan soo sheegnay iyo taas oo sii wadi doonta in marba mar la cusbooneysiiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Affinity waxay mar labaad siineysaa tijaabooyin 90-maalin ah oo barnaamijyadeeda cajiibka ah iyo qiimo dhimis 50% ah